Ndege - Wikipedia
konstrukcija, naprava ali iznajdba, zlasti vozilo, ki je načrtovana in oblikovana tako, da jo podpira zračna masa s pomočjo dinamičnega delovanja zraka na površino konstrukcije ali predmeta ali s pomočjo vzgona
Ndege (Aeroplane) in English. Kuti ndege isumuke kune zvinhu zvakakosha zvinoti:
Mapapiro akatwasuka pasi ane pamusoro pakaita hubumbe.
Kugona kumhanya kusvika paspidhi yakakura unozogonesa ndege kusimuka.
Kana mhepo ichinge ichivhuvhuta puresha yayo inodzika nekukwira kunoita spidhi yemhepo. Kana spidhi yemhepo ikaderera puresha yemhepo inokwira. Kucherechedzwa kwechiitiko ichi ndiko kunoshandiswa pakusimudza ndege kuenda mudenga.
Paye ndege inenge yomhanya panhandare yendege mweya unomhanya ichipesana nemapapiro endege. Puresha iri pasi pemapapiro inosiyana nepuresha iri pamusoro pemapapiro.
Mweya uri kufamba nepasi pebapiro inefamba nhambwe diki pane iri kufamba nepamusoro. Izvi zvinokonzerwa nokuti pasi pakatwasuka, asi pamusoro pakaita hubumbe.
Izvi zvoreva kuti mweya uri pamusoro pemapapiro unomhanya nemurumba wakakura kudarika uri pasi. Kusiyana kwespidhi kunokonzera kusiyana kwepuresha sezvataurwa pamusoro.
Izvi zvinoreva kuti puresha iri pasi pebapiro yakawanda pane iri pamusoro pebapiro. Kuwanda kwepuresha pasi pemapapiro fosi inonzi simudzo inova ndiyo inosimudza ndege kuenda mudenga.
Paku bhururuka kwendege, pane mamanikidzo(force) mana anonge achitamba pandege. Manikidzo idzi dzinoti, simudzo, gwesho, gunganidzo ne thrust. manikidzo yesimudzo neye gunganidzo dinopesana kana kuti kupikisana dzichibva mativi akasiyana. Ye gwesho ne thrust zvinopikisanawo zvichibva mativi akasiyana asi manikidzo idzi dzinenge dzaka chinjikana ne-e simudzo ne gunganizo. Kuti ndege ikwanise kubhururuka, manikidzo yesimudzo inenge yakafanana neye ngunganidzo.
Simudzo = gunganidzo
Uye ye gwesho inenge yaka fanana neye thrust
Gwesho = thrust
Kana uri mundege zvinhu zviri pasi zvinogangarika: when you are in an aircraft the things on the ground are clearly visible.
VaMambwe vanoti ndeke (n. aeroplane) kureva ndege.
VaMakua vanoti ntteeke (n. aeroplane) kureva ndege.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Ndege&oldid=72184"
Last edited on 2 Kubvumbi 2020, at 21:23
This page was last edited on 2 Kubvumbi 2020, at 21:23.